मिलान Pinacoteca di ब्रेरा: एक विवरण, चित्रहरू एक संग्रह
इटाली कला संग्रहालय आफ्नो विविधता र वैभवशाली मा हडताली छन्। एक भ्रमणको योग्य वैज्ञानिक Delights, र प्रत्येक संग्रहालय वा ग्यालरी - भव्य महलों, रोम - - धार्मिक कलाकृतिहरू, मिलान फ्लोरेन्स: देश मा कुनै पनि शहर मा प्रत्येक पर्यटक अघि कला सम्पत्तिहरू, कुनै पनि अन्य देश को ईर्ष्या हो जो एक संग्रह देखिन्छन्।
सुन्दर क्वार्टर मिलान
इटाली प्रसिद्ध संग्रहालयहरु र विशेष मिलान को एक, Pinacoteca di ब्रेरा, एउटै चौथाई मा स्थित छ जो मानिन्छ। नाम जसको अर्थ इटालियन शब्द "braida" वा "ब्रेरा", आउँछ "भूमि रूखहरू खाली गरियो।" क्षेत्र एक पटक शहर को एक भाग छैन, र उहाँलाई संग सिमाना थियो, तर अब तस्वीर ग्यालरी बाहेक, त्यहाँ पनि छ किनभने असल कला को एकेडेमी, कारण Bohemian वातावरण एक प्रकारको गर्न "मिलान को Montmartre" भनिन्छ चौथाई। मिलान गरेको नाइटलाइफ को एक लोकप्रिय क्षेत्र - यस क्षेत्रमा तपाईं ब्रेरा रूप मा, Astronomical वेधशाला, वनस्पति उद्यान, र साँझ र युवाहरूलाई जाँदै राति देख्न सक्छौं।
ब्रेरा कला ग्यालरी
थिए बोर्डहरू मा चित्रित जहाँ तिनीहरूले कला काम, माटो टेबल को एक किसिम सहित राख्न कोठा, चित्र पुरातन युनानी र अन्य कामहरू चित्रित। यी पछि प्रयोग र रोमी गर्न थाले जो भनिन्छ भण्डारण Pinakothek छन्। Pinakothek आज भनिन्छ कला (आर्ट) ग्यालरी, क्षणमा ती सात मात्र छन् जहाँ, र यी मध्ये Pinacoteca di ब्रेरा छ।
यस दरबारमा स्थित, र हरेक पर्यटक को प्रवेश मा नेपोलियन को एक मूर्तिकला पूरा, र चोकमा को परिधि वरिपरि arched पदहरू संग सजाया छ। ग्यालरी इटाली सबैभन्दा भ्रमण संग्रहालयहरु मध्ये एक छ, र लोकप्रियता 20 स्थान मा स्थित छ।
को Pinakothek chronologically प्रबन्ध र चित्रकला को विद्यालय विभाजित छन् पर्यटकहरू सुविधाको लागि हो कि चित्रहरु संग 38 कोठा छन्। को हल को एक XX सताब्दी को कला समर्पित छ।
सुरुमा, विद्यार्थीहरूको लागि एक रूपरेखा त्यहाँ अस्तित्व, र केवल 1882 मा त्यहाँ एक कला, ललित कला को एकेडेमी को विद्यार्थीहरू बीच धेरै लोकप्रिय छ थियो।
Pinacoteca di ब्रेरा: चित्रहरु
30 भन्दा बढी हल प्रसिद्ध द्वारा काम पकड इटालियन कलाकार फरक eras देखि। को हल मा तपाईं Caravaggio, Goya, Tintoretto, रेम्ब्रान्टका द्वारा काम पाउन सक्नुहुन्छ। तस्वीर ग्यालरी वितरण र epochs विभाजित छन्, तर त्यहाँ इटाली को प्रतिष्ठा ल्याए जो केवल एक कलाकार समर्पित छन् भनेर केही कोठा छन्।
ग्यालरीमा एक विशेष सुविधा - को 14-16 शताब्दीयौंदेखि स्वामित्वको मात्र चित्रहरू, तर frescoes समावेश गर्दछ। तिनीहरूले जहाँ बर्बाद भवनहरु को लेआउट पुन: सिर्जना गर्न प्रयास गरेका छन् विशेष हल मा प्रदर्शन गर्दै छन्, जो त्यहाँ frescoes थिए।
सबै भन्दा प्रसिद्ध र मौलिक काम "मृत ख्रीष्टले" (Mantegna) प्रारम्भिक 16 औं शताब्दीमा सिर्जना, "सेन्ट मार्क '(Tintoretto) को चमत्कार," Moise Kisling को पोर्ट्रेट "(Modigliani)," यो भर्जिन "को विवाह (राफेल) जस्ता मानिन्छ । ग्यालरीमा को संग्रह सम्बन्धित चित्र, इटालियन चित्रहरु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संग्रह हुन्। संग्रह धेरै वर्ष को लागि संकलित, र त्यहाँ छैन aristocrats देखि दानको धन्यवाद छ, तर कारण जहाँ उत्पादनहरु विशेष शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्न खरिद थिए प्रगतिशील सांस्कृतिक नीति, को।
मिलान Pinacoteca di ब्रेरा इटालियन मालिकको द्वारा मूल्यवान चित्रहरु राख्छ, र पहिलो कोठा मा येशू ख्रीष्ट विभिन्न समयमा विभिन्न कलाकारहरूको गर्ने सिर्जना को छवि समावेश छन्: रूस, मारिनो, Modigliani र अरूलाई।
अर्को Dzhovanni डी मिलानो जस्ता कलाकारहरूको द्वारा 13-16 शताब्दीयौंदेखि को इटालियन चित्रकला र काम निम्न हल मा। भेनिस चित्रकला उमेर 15-16 हल5र6मा स्थित छ, र सबै भन्दा प्रसिद्ध काम - "मरियम र जन संग ख्रीष्टको विलाप," Giovanni Bellini द्वारा लिखित।
भेनिस काम अवधि 7, 8,9र तस्वीर प्रतिनिधित्व कहाँ लोट्टो, Tintoretto, बास र अरूलाई हल को 14 मा देख्न सकिन्छ।
लोम्बार्डी अवधि काम 15 र 19, हल हो जहाँ पोट्रेट, विभिन्न monasteries मा संकलित थिए जो परिदृश्य र फ्रेस्कस।
अलग Emilia द्वारा अध्ययन, जो को केन्द्र बोलोग्ना छ। यी कामहरू 20, 22 र 23 हल पाउन सकिन्छ। 21 हल - पिएरो डेला Francesca र राफेइल - 15 औं सताब्दी को काम हो, र हल 24 मा। यहाँ प्रदर्शन भएको चित्रहरु पनि पुनर्जागरण (उमेर 15-16) मा पर्छन्।
27 र 28 हल - केन्द्रीय इटाली painting, 30 सुविधाहरु - लोम्बारड 17 औं सताब्दी, 31, 32 र 33 क्षेत्रमा painting - यो नेदरल्याण्ड्स ले कलाकारहरूको काम गर्छ, 34 हल - यस 18 औं शताब्दीको भेनिस चित्रकला, 37 र हल को 38 - को 18 औं शताब्दीमा, 35 र 36 को प्रतीक - यो 19 औं शताब्दीको चित्रकला।
यथार्थवाद को संस्थापक र 17 औं सताब्दी को सबै भन्दा ठूलो बारोक मास्टर थियो Caravaggio (माइकलएन्जेलो Merisi), - नम्बर 29 मा सुविधाहरु पूर्णतया ठूलो इटालियन मालिकको काम गरेर फिर्ता भएको छ। यसलाई आफ्नो काम सबै क्यानभास सिधै जन्माई छ जो उल्लेखनीय कलाकार थियो, र त्यहाँ चित्रकला कुनै एक वा स्केच थियो।
Pinacoteca di ब्रेरा एक विजार्ड र उहाँका चेलाहरू छ, र ग्यालरी मा सबै भन्दा प्रसिद्ध चित्रकला को 1605 "इम्माउस मा रातीको अन्तिम खाना" छ - 1606 सृष्टिको वर्ष। ख्रीष्टको दुई चेलाहरूको अगाडि आफ्नो टाँग्ने पछि तेस्रो दिन मा भयो जब यो चरमोत्कर्षलाई चित्रण गरिएको छ।
Caravaggio नै नाम को दुई तस्वीर चित्रित, तर पहिलो 1602 मा लेखिएको थियो, र आज लण्डन राष्ट्रिय ग्यालेरीमा राखिएको छ। मिलान प्रस्तुत तस्विर, एक सरल संरचना छ यसलाई उज्ज्वल रंग प्रयोग गर्दैन, मान्छे इशाराहरू राखिएको र कलाकार शैली अघिल्लो काम भन्दा बढी उदास छ।
21 औं शताब्दीको Pinacoteca
एक लोकप्रिय संग्रहालयहरु तिनीहरूले इटालियन मालिकको विभिन्न eras को कला थाह प्राप्त गर्न सकिएन भनेर प्रत्येक दिन पर्यटकहरूलाई ढोका खुल्छ को। यी विद्यार्थीहरूले निरन्तर, चित्र हेर्न प्रविधि र कलाकारहरूको को युग अन्वेषण आउँदैछन्।
ग्यालरीमा बाहेक 25 भन्दा बढी हजार मात्रा संकलित जो समकालीन कला, एक पुस्तकालय छ। पुस्तकालयको, विद्यार्थी, शिक्षक भ्रमण र मान्छे सबै खुला छ, विभिन्न प्रतियोगिताहरु, संग्रहालय वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ जानकारी जो बारेमा गतिविधिहरु र परियोजनाहरू, हो कि extracurricular पाठ्यक्रम खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
Pinacoteca di ब्रेरा: ठेगाना र को मूल्य
शहरी क्षेत्रमा 1 मा, एउटै क्वाटरमा Pinakothek मार्फत ब्रेरा 28 ग्यालरीमा प्राप्त गर्न मा स्थित, तपाईं 10 यूरो लागत जो एक टिकट, खरिद गर्नुपर्छ, र नागरिक सुअवसर विभाग लागि -7यूरो।5यूरो को एक शुल्क लागि सबैलाई अडियो पुस्तिका, एक भ्रमण गर्न मदत गर्नेछ जो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि, कृपया वेबसाइट तस्वीर ग्यालरी बुझाउँछ।
कहिल्यै मिलान प्रसिद्ध ग्यालरी भ्रमण गर्ने सबैलाई, त्यो देखे के संग खुसी थियो। यो संग्रहालय सबै गाइड मा समावेश गरिएको छ र कला प्रेम गर्नेहरूका लागि हेर्नको लागि यो दिन लोकप्रिय छन् जो इटालियन मालिकको, सिफारिस गरिएको छ, र विशेष। को Pinakothek बिताएको केही घण्टा किनभने यो वास्तविक कला छ, तस्वीर बलियो छाप छोड्न रूपमा द्वारा उड। Pinakothek - छैन लोकप्रिय पर्यटकहरु बीच, ठाउँ किनभने धेरै मानिसहरू किनमेल लागि मिलान आउन र कला अध्ययन गर्ने अधिकांश मानिसहरू मा संग्रहालय जाने र तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह छ। संयोगले ग्यालरी आए वा यी सांस्कृतिक ठाउँहरू भ्रमण गर्न रुचि गर्नेहरूलाई, यो आवश्यक अडियो पुस्तिका वा सिर्फ एक गाइड चित्रहरु र कला को काम सिर्जना गर्ने कलाकार को इतिहास बारे धेरै बताउन गर्ने लिन सिफारिस गरिएको छ।
Nizhny Novgorod, प्रदर्शनियों: पोस्टर हेर्नुहोस्
राज्य संग्रहालय-रिजर्व "Tsaritsyno": विवरण, मूल्यहरू, फोटो, ठेगाना। को "Tsaritsyno" संग्रहालय-रिजर्व गर्न प्राप्त?
Neologisms, आफ्नो उपस्थिति, नयाँ रूसी शब्दहरू प्रक्रियाहरू उदाहरणहरू
भारतीय देवताहरूको: तिनीहरूलाई हराएको गर्न कसरी छैन?
पावलले हुनेछ वास्तविक नाम र जीवनी को एक संक्षिप्त सिंहावलोकन
एक वेबसाइट बनाउनको लागि कदम
आमाबाबुको इच्छा, धरती मा सबै भन्दा मूल मान्छे
Salekhard आकर्षण: शहर देख्न के?